Ukutolika ubuthongo malunga nemali: iphepha leebhilikhwe, igolide okanye i-yesinki yesimbi. Oko kuthetha, ukuba uthetha imali ephupheni.
Kutheni uphupha imali?
Yintoni enokuthi idibene nephupha, apho imali yayisisigxina? Ukuchaneka kwamaphupha.
Ungayiqonda njani iphupha apho uphupha khona imali? Ingaba lo ngumqondiso weengxaki eziphathekayo okanye, ngokuchaseneyo, uphawu lokuphucula imeko yezemali? Kwincwadi yethu yephupha uya kufumana ingcaciso ewandisiweyo yemibono yobusuku ukucacisa okokulindela ngokuzayo.
Imali ibonakala ngathi?
kunika ixesha elide kwiimali zakho, ngenxa yokuba isimo sengqondo esinokubakhokelela kuzo singakuqhubela kwiityala.
Ukufumana imali yemaphepha kuthetha ukuba imeko yakho yezemali iya kuqala ukuphucula ngokuphawulekayo.
kugcina imali yamaphepha kwizithembiso ezisekusondeleyo ukuba uthathe inxaxheba kwishishini elithile elinenzuzo. Ukuba unikwe iphrojekthi entsha, khawuleza uvumelane. Oku kuya kuzisa izibonelelo eziphathekayo.
Ukuba uphupha ngemali, ejikeleze kakhulu, kwaye ube ngumntu ocebileyo, ngoko ngokwenene yonke into iya kuba yinto echasene nayo kwaye i-income iya kuncipha.
Ukubona kwiphupha obafumanayo ukusuka kwelinye ishishini, ke ulungiselele ilahleko. Zilahleke - kwiintsilelo ezincinane.
Ukuthatha imali emhlabathini kuyisixwayiso ngqo malunga nendlela yokulahleka. Ukuba iindleko zibuxoki, ngoko uya kujongana nobuqhetseba, kwaye yonke into enokwenzayo ayiyi kuzisa iingeniso, kodwa i-force kuphela ayisebenzisileyo.
Indoda ebone indlela ehlawulwa ngayo, iya kubakho ukunganakwa kunye nokubanda komfazi okanye umthandi. Ukuba umvuzo uphuhlisiwe ngokwabo, ulindele ukuhlukana nomntu osondeleyo.
Ukugcina iimali zegolide kuthetha ukuba imeko yakho yezemali iya kuqala ukuphucula ngokukhawuleza. Kodwa ukuba ufuna ukuqokelela iimali zemali enye, kuya kufuneka ukhuthazele ubuninzi beengxabano, ekugqibeleni, kuya kuphumela ekuphumeleleni kwimisebenzi nemali.
Bekani ingqalelo kwiingqekembezo ngokwabo. Ukuba zincinci kwaye azibizi - ngoko ulinde phambi kwengxaki. Inzuzo iya kuzisa kuphela iindleko zegolide ezinkulu.
Ukubona ngaphaya kweengxowa-mali ezininzi, kodwa ukuba ungakwazi ukuzenza, kuthetha ukuba uchithe amandla akho kwaye utshintshana. Lo luhlobo lwesilumkiso ofuna ukugqiba kunye nokukhetha indlela eyodwa yobomi, kwaye ungazami ukuba nexesha ngokukhawuleza.
Iimali zensimbi - oku kuyisixwayiso sokuba kufuneka ube nomonde ekufezeni injongo. Ngokuqinisekileyo uya kuphumelela, kodwa kungekudala kwaye kunzima.
Okunye ukutolika kwamaphupha ngemali
Kwincwadi yephupha yaseRomany ibhaliwe ukuba awukwazi nakanjani ukunika umntu. Ukwazisa ukuba ulindele ukulahlekelwa okukhulu kwi shishini. Ukuba uphupha ngophando lwemali okanye ubuncwane, uya kuba nomhla onzima, kwaye uza kuwuboleka nakwabahlobo.
Kodwa ngelo xesha, ukufumana iibhokhwe njengesipho okanye ngendlela yokuhlawulwa komsebenzi okwenziweyo kuthetha ukuba uya kuvuzwa ngemali ngeenkonzo zakho.
Incwadi yeliphupha yaseTshayina iholele enye ingcaciso yemali ephupheni. Ukuba ubapha - uthembisa ukuphola ngokukhawuleza kuwe okanye kwiintsapho ezinokugula ixesha elide.
Ukuthatha iibhilikhwe okanye iimali ezivela emhlabathini okanye phantsi kuthetha ukuba unenhlanhla phambi kwakho, okuya kuzisa inzuzo ngeyona nto inzima.
Kodwa ukwabelana nomfazi okanye umyeni wakhe kubonisa ukuhlukana ngokukhawuleza kule ndoda.
Kwincwadi yephupha likaMiller kuthiwa ukubona imali eninzi oboleke kumntu ihambelana ngqo nesimo sakho kuluntu. Uthathwa njengomntu ofanelekileyo nohlonelweyo. Kodwa kubantu abasondeleyo uya kuzifumana ungenakuqonda kwaye unenkohlakalo.
Umfazi osemncinci ochitha imali mboleko ebolekwayo ngumqondiso ombi. Mhlawumbi uya kukopela umntu aze abanjwe kushushu. Esi sikhalazo siza kubangela ukuhlukana nomthandi okanye umhlobo osondeleyo.
Kutheni umntwana efile ephupha?
Ukutolika kwamaphupha: yintoni indiza ephuphayo ngayo
Iphupha malunga nomngcele wegolide: ukutolika
Kutheni ufuna ukuphupha umfazi wakhe?
Ukutolika kwamaphupha: Yintoni umama aphupha ngayo
Ngamaphi amaphupha athetha ntoni ngomntu owayengumthandi
Ukukhetha umbala welinen yelinen
Indlela yokudlulisa intsapho ekudleni okunempilo
Inyo yokuqala kumntwana
Ukoyika oogqirha kubantwana
Yintoni e-non-optimization liposuction?
Kuthekani ukuba umyeni wam akaphume kwi-intanethi?
Abantwana u-Alla Pugacheva kunye noMaxim Galkin baya kuontanga
Kutheni sifuna abanye abantu ngaphezu kwethu?
Gcoba kwiimbotyi eziluhlaza kunye nepipper e-sweet
Ukutya kokutya kunye neempilweni zempilo
Uviwo lokubonwa kwabantwana abangaphantsi kweminyaka elilodwa ubudala
Iintsana ezinamathelisi: iimpahla ezifashisayo zintsana
Kuthekani ukuba umhlobo omdala uvuma ukuba uyakuthanda?
Indlela yokwakha ubudlelwane nentombi yomthetho